I-1 - 6 yohlu lwe-6
Ukulima Ukuphila Emphakathini Onobungane Ovikelekile - West Wyalong - Nsw
Impilo yokulima emphakathini ophephile onobungane - iWest Wyalong - INSWYikhaya lakho elisha e-RFBI West Wyalong Masonic Village isiseduzane nesikhungo sedolobha elinomlando iWest Wyalong esifundeni esihle se-Riverina. Inamagugu egolide acebile futhi athakazelisayo amagolide kanye nezakhiwo ezinhle zamagugu ezigcinwe kahle.Ngoku ...
Ukunakekelwa Kwendawo yokuhlala e-Easton Park - Glenfield - Nsw
Ukunakekelwa Kwendawo yokuhlala e-Easton Park - Glenfield - I-NSWWhiddon i-Easton Park iyisevisi yokunakekelwa kwabadala esezingeni laseSydney eningizimu nentshonalanga. Kutholakala eGlenfield, e-Easton Park kunikezela ngemikhakha eyahlukene yokuthola umklomelo kubantu abadala.
I-Tricare Stafford Lakes I-Aged Care Residence - I-Chermside West - I-QLDWELCOME TO STAFFORD LAKESTraditions Comfort is ithuthukiswa ukunakekelwa okunempilo okudala endaweni yethu yokuhlala yesimanje yaseStafford Lakes, edonswa phambili yimibono kuphela oqondayo angayilindela. Ukunikeza ngenduduzo eyahlukahlukene ...
Ihostela Lokuthatha Umhlalaphansi Lewisham - Lewisham - Nsw
I-Lewisham Retirement hostel - I-Lewisham - I-NSWIhostela linomuntu onobungane futhi ozizwa enekhaya ngokugxila kakhulu kwimpilo yabo bonke abahlali. Isakhiwo sanamuhla esinezitezi eziningi (esinokuphakamisa) sinikeza amakamelo okulala avulekile, amanye anamakholomu. Amagceke alungiselelwe anikezela izikhala zokuphumula zangaphandle zokuzijabulisa nge-v ...
Idolobhana Elihle Lifunwe Ngemuva Kwe-Center Of Berry Community - Berry - Nsw
Idolobhana elihle elisesikhungweni somphakathi iBerry - I-Berry - NSWRFBI I-Berry Masonic Village ifakwe ezindaweni ezithandekayo ezise-Berry, idolobha elihle elihle elinamahora amabili nje kuphela ukuya eningizimu yeSydney futhi lingamakhilomitha angama-17 ukusuka edolobheni lesifunda laseNewra. Umuzi ungaphakathi kokuhamba ...
I-Australia, ngokusemthethweni i-Commonwealth of Australia, iyizwe elizimele elihlanganisa izwekazi lase-Australia, isiqhingi saseTasmania neziqhingi eziningi ezincane. Yizwe elikhulu kunawo wonke e-Oceania kanye nezwe lesithupha ngobukhulu emhlabeni endaweni ephelele. Amazwe angomakhelwane yiPapua New Guinea, i-Indonesia ne-East Timor enyakatho; iSolomon Islands neVanuatu enyakatho-empumalanga; kanye neNew Zealand ngaseningizimu-empumalanga. Inani lezigidi ze-25 lisemadolobheni kakhulu futhi ligxile kakhulu olwandle olusempumalanga. Inhlokodolobha yase-Australia yiCanberra, futhi idolobha layo elikhulu kakhulu yiSydney. Ezinye izindawo ezinkulu zedolobha elikhulu yiMelbourne, iBrisbane, iPerth ne-Adelaide. Abantu bomdabu base-Australia bahlala ezwekazini cishe iminyaka eyi-65,000 ngaphambi kokutholwa kweYurophu ngokufika kwabahloli bamazwe baseDashi ekuqaleni kwekhulu le-17th, abayiqamba ngokuthi yiNew Holland. E-1770, inxenye engasempumalanga ye-Australia yafunwa yiGreat Britain futhi ekuqaleni yaxazululwa ngokuthuthwa kwamaloli yaqonda koloni lwaseNew South Wales ukusuka e26 Januwari 1788, usuku olwaba usuku lukazwelonke lwase-Australia. Isibalo sabantu sikhula ngokuqinile emashumini eminyaka alandela, kwathi ngesikhathi kugijinyelwa igolide ngama-1850s, iningi lezwekazi lase lihlolwe futhi kwaqalwa amakoloni amahlanu azobusa ngokwawo. Ngo-1 uJanuwari 1901, amakoloni ayisithupha ahlanganiswa, akha i-Commonwealth yase-Australia. I-Australia selokhu yagcina inqubo yezombusazwe yenkululeko yenkululeko esebenza ngokuqinile njengombuso wobumbano womthethosisekelo wezwe, ohlanganisa izifunda eziyisithupha nezindawo eziyishumi. Njengoba iyizwekazi elidala kunazo zonke, elithambile futhi elomile kakhulu, elinenhlabathi evundile, i-Australia inendawo engamakhilomitha-skwele angama-7,617,930 (2,941,300 sq mi). Izwe elinama-megadiverse, usayizi walo ulinikeza indawo enhlobonhlobo yemvelo, enezinkangala enkabeni, amahlathi emvula asentabeni enyakatho-empumalanga kanye nezintaba eziseningizimu-empumalanga. Ubuningi babahlali, abahlali be-2.8 ngekhilomitha skwele ngalinye, lihlala liphakathi kwabaphansi kakhulu emhlabeni. I-Australia ikhipha imali engenayo emithonjeni ehlukahlukene kufaka phakathi ukuthunyelwa okuhlobene nokuthengisa ngaphandle, ukuxhumana ngocingo, ukubhengeza kanye nokukhiqiza.Australia iyizwe elithuthuke kakhulu, ngomnotho omkhulu we-14th emhlabeni. Inomnotho onomholo ophakeme, onemali yeshumi ephezulu kakhulu kumhlaba ngamunye. Amandla wesifunda, futhi anezindleko zomhlaba eziphakeme ze-13th. I-Australia inesibalo esikhulu kunazo zonke emhlabeni, okufika kuzo kubalelwa kuma-29% wabantu. Ukuba nenkomba yesithathu yokuthuthuka kwabantu ephezulu kakhulu kanye nentando yeningi ebekwe endaweni yesishiyagalombili emhlabeni jikelele, izwe liklelinye izinga lezempilo, ezempilo, ezemfundo, inkululeko yezomnotho, inkululeko yomphakathi namalungelo ezepolitiki, nawo wonke amadolobha amakhulu ahamba kahle ekulweni kokuqhathanisa komhlaba jikelele inhlolovo. I-Australia ilungu leNhlangano Yezizwe, i-G20, i-Commonwealth of Nations, i-ANZUS, i-Organisation for Co-sebetsa and Development (OECD), i-World Trade Organisation, i-Asia-Pacific Cooperation, iPacific Islands Forum kanye ne-ASEAN Plus Six mechanism.